Maydadka 4 ruux Soomaali ah oo la gubay oo laga helay dalka Kenya, Yaase ka dambeeyay dilkooda? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maydadka 4 ruux Soomaali ah oo la gubay oo laga helay dalka...
Maydadka 4 ruux Soomaali ah oo la gubay oo laga helay dalka Kenya, Yaase ka dambeeyay dilkooda?
Nairobi (Halqaran.com) – Maydadka afar ruux oo Soomaali ah oo la dilay, kadibna la gubay ayaa laga helay gudaha dalka Kenya, sida ay ku waramayso Warbaahinta dalkaasi.
Dadkaan ayaa maydadkooda waxaa laga helay Gobolka Tanariva ee Galbeedka dalka Kenya, kadib markii Booliska lagu soo wargeliyay maydadka oo la gubay.
Afarta ruux ee la dilay laba ka mid ah waxaa la sheegay inay walaalo ahaayeen, waxaana magacyadooda lagu kala sheegay Xuseen Cali iyo Mustaf Cali, lamana oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dilkooda.
Labada ruux ee kale ayaa iyagana waxaa la sheegay inay ahaayeen Darawalo kaxeysa gaadiidka ka dhex shaqeeya Nairobi iyo Magaalada Gaarisa, waxaana maydkooda laga dhex helay iyaga oo lagu dhex riday Saqaf kadibna la gubay.
Warbaahinta Kenya ayaa ku waramaysa dadka falkaan gaystay inay iska dhigeen marka hore Ciidamada Booliska Kenya, kadibna markii ay dileen afartaasi ruux ay ka baxsadeen goobtii dilka ay ka gaysteen.
Ma cadda ilaa iyo hadda sababta rasmiga ah ee dableyda hubaysan ay sida foosha xun ugu dileen dadkaan Somalida ah ee maydadkooda laga helay Gobolka Tanariva ee Galbeedka dalka Kenya.
laba Soomaali walaalo ah
laga helay dalka Kenya
Maydadka afar ruux oo Soomaali